Xanuunka Maalinta Nakba oo Kale, Malaga Yaabaa Inay Soomaaliya Lasoo Gudboonaato? |
IMF: Saamaynta dhaqaalaha waddamada soo koraya
Cabdikhaadir Ibraahim Axmed — November 19, 2018
Dhamaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay allaah (SWT) ee nagu manaystay nimcooyin badan oo aan xisaab lahayn iyo rasuulkiisii suubanaa Muxamed (CSW).Intaa kadib waxaan salaamayaa guud ahaan Muslimiinta,gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed.Asallaamu calaykum warmatullahi wabarakatuh.
Bilow hortiis inta aanan u gudo galin u jeedka ay daaran tahay qormadaani waxaan jeclahay inaan iftiimiyo waa maxay maalinta Nakba ( يومالنكبة)?.
Maalinta Nakba oo ku beegan 15 bisha May waa maalin xasuus xanuun badan ku leh ummada reer Falastiin, waa maalin ay xusaan xasuuqii iyo barakicintii ay yuhuuda ku sameeyeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ay degenaan jireen intii u dhaxeysay sanadihii 1947 illaa 1949.
Waa maalin mugdi u ah dhammaan shacbi waynaha reer Falastiin waana maalintii dhaxal guur dhab ah uu ku dhacay dhulkoodii hooyo oo uu gacanta u galay Yuhuuda. Geesta kale waxay dawlada Israel u tahay maalin farxadeed waxayna ku astaysteen xuska maalinta madaxbaaninada iyo qaranimada dalkooda.
Dalka Falastiin waa dal aan aqoonsi dhab ah ka haysan qaramada midoobay, waa dal kujira gumaysi toos ah waana dal aan lahayn cid udooda oo xuquuq dooda usoo dhicisa, waa dal dunida oo dhan ay iska indho tireen waxa ka dhacaya iyo xasuuqa ay maamulka Yuhuudu ku hayaan shicibka maatida u badan ee reer Falastiin. Waa dal aan hay’adaha isku magacaaba inay u doodaan xuquuqda bini’aadamka aysan ka hawl gali karin isla markaasna aysan ka hadlin xaalada dhabta ee ka jirta Daanta Qasa oo had iyo jeer lagu gumaado shacabka reer Falastiin.
Falastiin waa dal leh dad iyo dal hasa ahaate waa dal aad moodid in loogu talagay in khariidada calaamka laga saaro dad ahaan iyo dal ahaanba, waa dal ay badi dadkiisu yihiin qaxooti buux dhaafiyey xeryooyinka qooxitaga ee caalamka.
Hadaba waydiinta kor aan ku soo xusay ee ahayd Soomaaliya malaga yaaba inay lasoo gudboonata xuskaan oo kale waxaa igu gkalifay inaan is waydiiyo dhawr sababood oo aan hoos ku xusi doono.
Sababta kowaad waxay tahay Soomaaliya ma tahay dal xor ah oo madax banaan mase kusii jiri doonta wadamada aqoonsiga ka haysta beesha caalamka iyo qaramada midoobay?
Waxaa dhawaanahan saaxada calaamka kusoo badanaayay dafiraado toos ah oo lagu dafirayo qaranimada iyo jiritaan Soomaaliya waxaana ugu danbaysay hadalkii madaxwaynaha Eritrea Isaias Afwerki uu ku dafiray inay san jirin wax la dhaho Soomaaliya balse ay jiraan dawlad goboleedyo taag daran oo midba jaan ka mid ah dalka ay maamusho.
Waxay ahayd isla bishan dhexdeeda markii raysal wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu ku tilmaamay Gobolka Kerala inuu ka liito dalka Soomaaliya marka ay timaado dhimashada caruurta yaryar hadalkaas oo ah gaf iyo meel ka dhac lagula kacay dalka iyo dadkii Soomaaliyeed.
Hadaladaan kasoo yeeray masuuliyiinta calaamka ma ahan hadalo la dhayalsan karo mana ahan hadalo ay iska dheheen ee waxaa jirta sababo ay ugu dhiiradeen inaysan ka gaban hadalada noocan oo kale ah oo aysan kula dhiiradeen wadan kale oo waadama caalamka ka mid ah.
Way badan yihiin weerarada qaawan ee lagu duro madax banaanida iyo jiritaanka Soomaaliya haba kala duwanaadaan qaabka loo durayo iyo cida durayso magaca iyo meeqamka ay leedahay.
Dhawaan ayay ahayd markii jariirada Wikileaks ay daabacday qorsho sir ah oo ciiwaankiisu ahaa ‘’Ethiopia and Kenya’s secret plan to subvert Somalia’’ qorshahaas wuxuu sheegayay in labadaas dal ay kala qaybsanayaan Soomaaliya iyadoo dalkiiba uu qayb u helayo dhul dhan 300,000sq km iyo 5,000,000 million oo dad ah, isla markaas laga takhalusayo wax la yiraahdo Soomaaliya oo kasii mid ahaata wadamada caalamka.
Isku soo wada duub dagaalada iyo deganaasha la’aanta daba dheeraaday ee ka jirta Soomaaliya iyo maqnaanshaha dawlad dhexe oo xoog leh oo hanata xasilinta dalkeeda ayaa gun dhig u ah in loo soo tafaxayto in Soomaaliya la dumiyo oo la kala qaybsado ama ha suuro gasho ama yaysan suuro galine.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ‘’Nin xanuusan boqol u talisay’’ Soomaaliya oo kasoo kaban wayday qaran jabkii ku dhacay mudo laga jooga nus qarni waxay ay sababtay in cid walba ay kusoo dhiirato inay saamayn iyo talaba ku yeelata mustaqbalka iyo aayaha Soomaaliya.
Waxaan kusoo afmeeraya qormadan haddii aysan dadka Soomaaliyeed u tashan dalkooda kana ka fikirin mustqabalkooda in la gaari doono xili dalka Soomaaliya uu noqdo wax magac ahaan u jiro balse aan dawlad ahaan u jirin, isla markaas la oron doono waa baa waxaa jiri jiray dal la dhaho Soomaaliya oo geeska Afrika ku yaalo isla markaasna la xusi doono maalin loogu bariir daqiiqo masiibada ku habsatay qarankii Soomaaliya.
Hadaba inta aan halkaas xaaladu gaarin waxaa waajib ah in loo guntado siddii looga gaashaman lahaa khatarahaa soo aadan loogana fakari la haa siddii loo fur daamin lahaa xaalada barako beelka ah ee ka aloosan dalka Soomaaliya.
Tags: Malaga Yaabaa Inay Soomaaliya Lasoo Gudboonaato?Xanuunka Maalinta (Nakba) oo Kale
Next post Waa Maxay Dhir?
Previous post AMISOM: Adeegayaasha Minjo-xaabinta Israaca Soomaliyeed!!